Buddhist Circuit Of Odisha Tour | Kpọọ: + 91-993.702.7574 maka ntinye akwụkwọ
Oge nke Odisha na-aghọwanye ihe nleta ndị njem nleta. Ọtụtụ puku ụlọ nsọ, omenala ọdịbendị na omenala dị iche iche na ịma mma nke okike na anụ ọhịa wdg wetara otutu ndi njem nleta. N'etiti ihe ndị a nile, The Buddhist Circuit Of Odisha Tour aghọwo ezigbo ewu ewu. Ọtụtụ puku ndị mara mma ochie Ihe oyiyi Buddha nọ n'ebe dị iche iche na steeti. Buddhist Circuit Of Odisha Tour na enyere ndi mmadu aka n'inwekwu ihe omuma banyere omenala ndi Buddhist nke Odisha na banyere ulo Buddhist nke Odisha. The Buddhist Circuit Of Odisha Tour dị mkpa Buddhist plastic nkà na Odisha na-anọchite anya Bodhisattva Avalokiteshvara dị iche iche dị ka Padmapani, Lokeshvara, Vajrapani wdg. Onye nwere ike ịchọta ihe oyiyi nke Tara, Manjusri, Amoghasiddhi etc. n'oge a. Ụlọ ihe ngosi nka nke dị na Lalitgiri na-echekwa ọnụ ọgụgụ ndị Bodhisattva. Ọtụtụ ndị ọzọ na ọnụ ọgụgụ dị na Udayagiri na Ratnagiri dị nso. The Buddhist Circuit Of Odisha Tour na-ahapụ gị ịchọpụta ebe niile mara mma na Odisha.
Mgbe ị bịarutere na Bhubaneswar Airport / Rail Station, nyefee na họtel. N'ehihie ehihie na Nandankanan Zoo (Emechibidoro na Monday). N'abalị na Bhubaneswar.
Mgbe ụlọ ụka na-eleta nri ụtụtụ - Lingaraj, Rajarani, Parasurameswar, Mukteswar, & Ụlọ Akwụkwọ Bhaskareswar site na 7th ruo 12th century AD. N'uhuruchi ehihie na Khandagiri & Udayagiri Jain caves bụ nke 2nd narị afọ BC. N'abalị na Bhubaneswar.
Mgbe ụtụtụ nri ụtụtụ ụbọchị njem niile gaa na Ratnagiri, Udayagiri & Lalitgiri Buddhist Monasteries & Stupas. N'abalị na Bhubaneswar
Mgbe njem ụtụtụ na Nuapatna na-akwa ákwà, Sadeibarini Dhokra cast village & Mahima Cult na Joranda. N'abalị na Bhubaneswar.
Mgbe nri ụtụtụ na Puri en-ụzọ na Dhauli (Shanti Stupa), Pipili (Ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ), Konark (Sun Temple) na Chandrabhaga Beach. Nleta ọbịbịa na Onyenwe Jagannath (Ndị na-abụghị ndị Hindu ekweghị n'ime ụlọ nsọ), Raghurajpur (eserese Obodo). N'abalị na Bhubaneswar.
DAY 06: Ịdị mma